Ihe Nlereanya 7 nke Gosiri Ike Ike AR Dị na Ahịa | Martech Zone
Ihe Nlereanya 7 gosipụtara na Ike AR dị na ahịa
Thursday, July 5, 2018 Laura Buckler
Cheedị echiche banyere nkwụsị bọs na-atọ gị ụtọ ka ị na-echere? Ọ ga-eme ka ụbọchị gị bụrụ ihe ọchị, ọ bụghị ya? Ọ ga-adọpụ uche gị na nrụgide nke ọrụ ụlọ kwa ụbọchị. Ọ ga-eme ka ị mụmụọ ọnụ ọchị. Kedu ihe kpatara na ndị ahịa agaghị eche maka ụzọ okike dị otú ahụ iji kwalite ngwaahịa ha? Oh chere; ha emeela!
Pepsi wetara ahụmahụ dị otú ahụ na-aga London njem na 2014! Ogige bọs bidoro ndị mmadụ n'ime ụwa nke ndị ọbịa, UFOs, na robot na-achịkwa gburugburu ha.
Ọ bụ 2018, nke ahụ ka bụ otu n'ime ihe atụ kachasị mma nke eziokwu dịwanye elu na ahịa anyị hụgoro. Ma ọ bụghị naanị ya. Ọtụtụ ụdị adaberewo na teknụzụ a iji mepụta mkpọsa nkwado na-aga nke ọma.
You ma ihe kpatara AR ji arụ ọrụ? N'ihi na ọ na-atọ ụtọ! Ọ na-enyekwa ahụmịhe mmekọrịta, nke ahụ bụ ihe ndị ọkachamara n'ahịa na-eme mgbe niile. Ọ na-emepụta ngosipụta dị mma karị maka ngwaahịa, nke ahụ bụ ihe ndị ahịa na-eme mgbe niile.
Dịla njikere maka ihe atụ ọzọ? Nke a bụ ndepụta nke mkpọsa 7 nke gosipụtara otú ike AR nwere ike ịbụ n'ahịa:
Moosejaw bụ ụlọ ọrụ uwe ọzọ, na-ebipụta akwụkwọ katalọgụ ọzọ. Ihe ndị ahụ dị jụụ, mana kedu ka ị si adọta ọtụtụ ndị na-azụ ahịa mgbe ha nwere ọtụtụ ụdị ụdị nwere katalọgụ? - make na-eme katalọgụ ahụ pụrụ iche. Nke ahụ bụ ihe Moosejaw mere na 2011. Ọ bụ oge ụfọdụ gara aga, mana nke a ka bụ ezigbo ihe atụ nke iji egwu AR na ahịa.
Mgbe ejikọtara ya na Moosejaw X-Ray ngwa, ndị ọrụ nwere ike i scanomi peeji nke katalọgụ ahụ ma kpughee ụdị ndị ahụ. Na mberede, katalọgụ gị ị na-emebu ghọrọ ihe ngosi uwe ime.
WWF & Mandiri: vingchekwa Rhinos
Kedu ihe Ego Ego Ego Ehia na World Bank na-akwụ ụgwọ na akụ Mandiri? Ulo oru abuo a choro ichekwa rhino, ya mere ha sonyeere aka imepe agha a. Mgbe ndị nwere kaadị ibudatara ngwa ahụ, ha nwere ike ịmalite igwu egwuregwu dabere na teknụzụ AR.
Ọ bụghị naanị egwuregwu aka ya dị ọcha. Ndị ọrụ ahụ nwere ike ilekọta ụmụ anụmanụ n'ezie site n'enyemaka ego kọmputa ha. E nyere onyinye niile maka ebumnuche nchekwa rhino.
Ebube YouCam site na L'Oreal
Otu afọ gara aga, L’Oreal na Perfect Corp kwupụtara mmekọrịta ha. Nsonazụ ahụ? - YouCam etemeete - ngwa mara mma AR nke na-enye ndị mmadụ ohere ịnwale ngwaahịa dị iche iche site na ika. Ha nwere ike ịhụ etu ngwaahịa ndị ahụ ga - esi na - acha akpụkpọ ahụ ha, ha nwekwara ike ịmatakwu gbasara ha tupu ịzụta.
Ngwa a bụ kụrụ oke, ihe karịrị nde 3 nke ndị ọrụ ya android na n'elu 26K Fim na App StoreNa anyị maara na o siri ike ime ka ndị mmadụ na-elele ngwa. Nke a abụghị ngwa ị na-emebu etemeete. Ọ bụ ọkaibe n'ezie na nsonaazụ ya bụ ihe ezi uche dị na ya.
Sayduck Ngwá ụlọ Visualizer
Katalọgụ AR nke IKEA bụ nnukwu nsogbu site na mgbe ọ pụtara, mana ị maara na nke a abụghị naanị ngwa nke ụdị a dị na ahịa? Sayduck ka mma, ebe ọ bụ na ọ baghị oke otu ụlọọrụ.
Ngwa ahụ na-enye gị atụmatụ dị mfe, ma dị irè: ị nwere ike iji anya nke uche gị hụ ụdị ngwa ụlọ dị iche iche ga-adaba n'ụlọ gị. Chọrọ oche aha ọjọọ ahụ Eames nwere oche ezumike mana ị maghị etu ọ ga-adị na oghere gị? Maghị ma ọ bụ na ị ga-enweta ottoman, kwa? Ngwa ahụ na-enyere aka na mkpebi ahụ.
I nwere ike ịnọ na-eche: gịnị ka nke a nwere na azụmaahịa? Ọ dị mma, Sayduck na-arụkọ ọrụ na ụdị ndị na-eduzi ụdị, ndị chọrọ ime ka ndị ahịa ha nwekwuo obi ike n'ịzụta. Nke ahụ bụ ebe azụmahịa akụkụ kicks na.
Ọhụrụ Rlọ Ọrụ Mgbasa Ozi AR Anya Maka Studentsmụ akwụkwọ
Iji mee ka uwe ha dịkwuo ewu ewu na UAE, New Look bidoro mkpọsa ọchị AR iji gaa kaadị ụmụ akwụkwọ ha. O nyeere ndị ọrụ aka ịgwakọta na dakọtara ngwaahịa ịchọta ụdị mbinye aka ha, mana ha nwekwara ike ịnweta ọdịnaya ndị ọzọ na onyinye pụrụ iche.
Nke a bụ mgbasa ozi izizi izizi na Middle East, ọ bụ ya mere eji anabata ya nke ọma. Na gafere Mmekọrịta 10K kwa ọnwa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji asaa nke njikọ aka, ọ na-eme ka mmata mara n'etiti ndị na-ege ntị.
Akwụkwọ agba agba nke Disney's AR
Disney malitere iji AR iji weghachite akwụkwọ agba agba na 2015, mana ụlọ ọrụ ahụ gara n'ihu na-eme mkpọsa ahụ.
Akwụkwọ ndị na-acha agba agba na-atọ ụtọ oge niile, mana ha anaghịzi agbanwe agbanwe. Mgbe ụmụaka ahụ hụrụ ụdị ahụ site na ngwa AR, ha na-enweta akụkụ ọhụụ. Nke a bụ ngwa dị mfe nke teknụzụ nke na-emeghekarị ikike.
Pizza Hut's AR NchNhr
Eziokwu gbara ume bụ ihe bara ụba na ọ nwere ike ịchọta mmejuputa ya na ụdị ụlọ ọrụ ọ bụla. Inslọ oriri na ọurantụurantụ adịghịkwa iche. Pizza Hut chọtara ụzọ dị iche iche iji meziwanye menu ya site na teknụzụ AR.
Ngwa mepụtara Engine Engine; otu ụlọ ọrụ ahụ rụrụ ọrụ na ngwa ọhụụ ọhụrụ anyị kpọtụrụ aha n'elu.
Oge a, ndị otu ahụ mepụtara obere ihe ịma aka nke mere ka Pizza Hut's menu bụrụ ihe ọchị. Ndị ọrụ ahụ jiri ngwa Ogle mee ihe nyocha ihe osise. Nke ahụ duuru ha gaa obere egwuregwu ịma aka na ohere iji merie ezinụlọ kwa ụbọchị. Ngwa ahụ nyekwaara ha aka ịchọgharị na menu ma tinye usoro iwu. Ihe ngosi 3D nke nri na-eme ka obuna agu.
Anyị ka na-enyocha ezigbo ikike ịzụ ahịa nke AR
Ihe atụ ndị a na-egosi otu ihe ịga nke ọma nke itinye eziokwu na azụmaahịa nwere ike isi rụpụta ezigbo nsonaazụ. Mana nke ahụ ọ kachasị mma anyị ga-ahụ? Ọ dịghị ma ọlị! Teknụzụ a na-emepe ụwa nke ohere. Naanị anyị kwesịrị inyochakwuo ya ma chee echiche ndị ọhụrụ ga-emetụta ndị na-ege anyị ntị.
Already nwere ụfọdụ echiche n'uche, nri? Detuo echiche gị; ha nwere ike iduga gị na mgbasa ozi nkwado kachasị egwu!
Tags: arar atụar mmejuputakwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwudisney arihe atụL'Orealanyalee arpizzaPizza ụlọ arNgwa ngwa ngwa ngwa ngwawwfYouCam
Laura Buckler bụ onye ntinye aka na Akwụkwọ edemede. ScholarAdvisor na onye edemede na-enweghị akwụkwọ. Ọ gbadoro anya ma raara onwe ya nye ọrụ ya, na-agbanwe ahụmịhe ndụ ya ka ọ bụrụ akụkọ a na-akọ akụkọ. Na-arụ ọrụ dị ka onye njikwa ahia, ọ zụlitere echiche nke isii banyere ihe ndị mmadụ na-achọ. Can nwere ike iso ya na Twitter.
Ahịa Ahịa: Hụ Ezi Ike na Ndị Nlereanya Ndị A
BizChat: Nkwukọrịta Otu na Njikọ Aka